I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-6-8-21 - iHorror
Ikhaya Ama-movie ama-Horror I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-6-8-21
by UJames Jay Edwards June 8, 2021
ebhalwe ngu UJames Jay Edwards June 8, 2021
Kwenzenjani, Tightwads! ITightwad Terror ngoLwesibili ibuye futhi ngolunye uhlangothi lwama-movie wamahhala. Ngakho-ke hlola lokhu…
U-Annabelle (2014), uhlonipha uWarner Bros. Izithombe.
Ukuhlonipha Ukuhlangana: UDeveli Ungenze Ngakwenza, ake sibheke okungahambi- kokuqalaUkuqondisa Ukuqondisa-Verse movie. Annabelle yi-spinoff yango-2014 egxile endabeni yomsuka wodoli onedumela elibi kusuka endaweni yokuvula ye-movie yokuqala. Indaba yenzelwe futhi abalingisi bayisicaba, kepha iwashi elijabulisayo, noma ngabe ukwethuka okuhle kuphakanyisiwe kwavela kwenye i-movie.
Annabelle akukubi kangako njengoba abantu bekhumbula ukuthi kunjani, kepha akukho lapho kusondele khona U-Annabelle: Indalo (indaba yangempela yoqobo yodoli). Thola i-creepy doll yakho igcwalise kahle lapha eTubiTV.
UMagic (1978), umusa ngeTwentieth Century Fox.
Ngikhuluma ngonodoli abathukayo…Magic yi-movie eshaqisa ngokuphelele mayelana ne-ventriloquist enobuntu obuningi obukhipha obunye balabo bantu kwi-dummy yakhe. Isidumbu sakhe esidabukisayo.
Le movie ka-1978 inezinkanyezi ezenziwa uSir Anthony Hopkins, uBurgess Meredith no-Ann-Margret. Iphinde yaqondiswa nguRichard Attenborough kusuka kuskripthi nakwinoveli kaWilliam Goldman enamaphuzu kaJerry Goldsmith - iningi lasebukhosini laseHollywood khona lapho. Lesi futhi sasinenye yezinqola ezikhululekile ezake zaba khona, futhi sakhonjiswa kuthelevishini yokusakaza, ngakho-ke saphazamisa isizukulwane sonke sezingane. Uma ngabe wake wafuna ukubona uHannibal Lecter ebhekene nePenguin, hamba lapha futhi ubuke uMlingo eCrackle.
USolace (2015), umusa weFilmNation Entertainment.
Usizi kuyimfihlakalo ka-2015 mayelana nomenzeli we-FBI ofaka usizo lwedlozi ukuze limsize abambe umbulali obulalayo. Ngeshwa kubafana abalungile, umbulali naye unengqondo, ngakho uhlala isinyathelo ngaphambi kophenyo lwabo.
Usizi iyi-thriller yobugebengu ehlakaniphile, egcwele ukusonta nokujika okungaziwa ngisho nayisangoma. Ekuqaleni yayigxunyekwe njengokulandelwa kwe- Se7en, ekutshela konke odinga ukukwazi. Abalingisi nabo bangabokuqala, noSir Anthony Hopkins (futhi) njengosiyazi, uJeffrey Dean Morgan njengommeli we-FBI, noColin Farrell njengombulali. Phenya Usizi lapha kuVudu.
A History of Violence (2005), ngezilokotho ezinhle i-New Line Cinema),
Umlando Wodlame imayelana nosomabhizinisi wasedolobhaneni elinciphisa umzamo wokuphanga edilini lakhe lobusuku obunye. Imibiko elandelayo yezindaba imguqula abe ngusaziwayo wakule ndawo, odonsa ukunakekela kwesihonga esicabanga ukuthi sibona iqhawe njengendoda eyayimonile esikhathini esedlule. Vele kuyadingeka ukuziphindisela.
Umlando Wodlame Ibhayisikobho kaDavid Cronenberg, kodwa ivela ngo-2005, ngakho-ke ingenye yamafilimu akhe e-Oscar-bait kamuva, hhayi enye ye-gooey schlock flicks yakhe yokuqala. UViggo Mortensen udlala iqhawe, uMaria Bello ngunkosikazi wakhe, kanti u-Ed Harris ubonakala njengesiqhwaga. Hlola Umlando Wodlame lapha eTubiTV.
I-Snowpiercer (2013), ihlonipha i-RADiUS-TWC.
Ngenkathi sisendabeni ye-Oscar-bait…Snowpiercer Umdlandla we-Academy Ward Winner kaBong Joon Ho ngesitimela esihlala sihamba emhlabeni othunyelwe yi-post-apocalyptic, ogcwele iqhwa. Ngaphakathi kwesitimela, abantu bahlukaniswe ngezigaba zenhlalo njengoba bebangaphandle.
Le movie ka-2013 yakhiqiza uchungechunge lwethelevishini ngonyaka odlule. Ngenkathi ama-Oscars kaBong Joon Ho engewona awalokhu (enzelwe silwanyana), ubungeke wazi kusuka kubalingisi bezinkanyezi, okubandakanya uChris Evans, uTilda Swinton, uJohn Hurt, uJamie Bell, u-Octavia Spencer, u-Ed Harris (futhi), no-Alison Pill. Hop ku Snowpiercer lapha ku-IMDB TV.
Umlando WodlameIphilisi lika-AlisonAnn-MargretAnnabelleAnthony HopkinsBong Joon-hoUBurgess MeredithChris EvansColin FarrellCrackleed harrisMahhalaAmabhayisikobho wamahhalaAma-movie wamahhala ku-inthanethiIMDB TVIMDBTVJamie BellUJeffrey Dean MorganJerry GoldsmithUJohn HUrtMagicUMaria BelloI-Octavia SpencerRichard AttenboroughiqhwaqhwaUsizii-tightwad terror ngoLwesibiliTilda Swintoni-tubi tvi-tubitvuViggo MortensenUWilliam Goldman
Ama-Movie aphezulu ama-5 athandwa kakhulu nguStephen King ahamba kwesokudla ...